Gịnị Ka M Kwesịrị Ịma Banyere Egwuregwu? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Egwuregwu nwere ike ịbara gị uru ma ọ bụ kpatara gị nsogbu. Ọ bụ ụdị egwuregwu ị na-egwu, otú i si egwu ya nakwa awa ole i ji egwu ya ga-ekpebi ma ọ̀ ga-abara gị uru.
Olee uru egwuregwu bara?
Olee nsogbu o nwere ike ịkpata?
Egwuregwu na-eme ka ahụ́ gbasie mmadụ ike. Baịbụl kwuru na ‘ọzụzụ nke ahụ́ bara uru.’ (1 Timoti 4:8) Otu nwa okorobịa aha ya bụ Ryan kwuru, sị: “Igwu egwuregwu na-eme ka mmadụ dị garagara. Ọ ka mma karịa ịnọ n’ime ụlọ na-egwu egwuregwu vidio.”
Egwuregwu na-eme ka mmadụ mụta iso ndị ọzọ emekọ ihe nakwa ịna-ejide onwe ya. Baịbụl mere ihe atụ banyere igwu egwu ma jiri ya kụzie ihe bara uru. O kwuru, sị: “Ndị niile na-agba ọsọ n’ọsọ egwuregwu na-agba ọsọ, ma naanị otu onye na-enweta ihe a na-agbata n’ọsọ. . . . Onye ọ bụla nke sokwa n’asọmpi na-enwe njide onwe onye n’ihe niile.” (1 Ndị Kọrịnt 9:24, 25) Gịnị ka ihe a na-akụziri anyị? Mmadụ ga-amụtarịrị iso ndị ọzọ emekọ ihe, mụtakwa ịna-ejide onwe ya ka ya na ndị ọzọ nwee ike igwu egwuregwu. Nwa agbọghọ aha ya bụ Abigail kwetara na ihe a bụ eziokwu. Ọ sịrị, “Igwu egwuregwu emeela ka m mụta otú mụ na ndị ọzọ ga-esi na-akparịta ụka ma na-emekọ ihe ọnụ.”
Egwuregwu na-eme ka mmadụ nwee ndị enyi. Egwuregwu na-eme ka ndị mmadụ na ibe ha na-emekọ ihe. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Jordan, sịrị, “Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ egwuregwu niile ka a na-asọmpi na ha. Ma, igwu egwuregwu ga-emekwa ka i nwee ọtụtụ ndị enyi ma ọ bụrụ na ị na-ele ya anya ka ihe ga-eme ka obi dị gị mma.”
Ụdị egwuregwu ị na-egwu. Baịbụl kwuru, sị: “Jehova na-enyocha ma onye ezi omume ma onye ajọ omume, mkpụrụ obi ya kpọrọ onye ọ bụla nke hụrụ ime ihe ike n’anya asị.”—Abụ Ọma 11:5.
O doro anya na e nwere egwuregwu ụfọdụ ihe a na-eme na ha bụ naanị ihe ike. Dị ka ihe atụ, nwa agbọghọ aha ya bụ Lauren sịrị: “Ihe onye ọ bụla na-eti ọkpọ na-ebu n’obi bụ ka o merụọ ibe ya ezigbo ahụ́. Ebe anyị bụ Ndị Kraịst, anyị anaghị alụ ọgụ. Gịnịzi mere ile ndị na-alụ ọgụ ga-eji na-atọ anyị ụtọ?”
Ihe ị ga-echebara echiche: Ì chere na igwu egwuregwu vidio a na-eme ihe ike na ya ma ọ bụ ile ya ele agaghị eme ka ị na-eme ihe ike? Ọ bụrụ na i chere otú ahụ, cheta na Abụ Ọma 11:5 kwuru na Jehova kpọrọ onye “hụrụ ime ihe ike n’anya” asị, ọ bụghị naanị onye na-eme ihe ike.
Otú i si egwu egwuregwu. Baịbụl sịrị: Emela ‘ihe ọ bụla n’ihi esemokwu ma ọ bụ n’ihi ịbụ onye onwe ya na-ebu isi, kama n’ịdị nwayọọ n’obi na-ewere na ndị ọzọ ka gị.’—Ndị Filipaị 2:3.
Nke bụ́ eziokwu bụ na obere asọmpi na-adịkarị n’egwuregwu ọ bụla a na-enwe òtù abụọ ma ọ bụ karịa na ya. Ma, ọ bụrụ na anyị a na-esi ọnwụ ka anyị merie, egwuregwu ahụ agaghịzi adị ụtọ. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Brian kwuru, sị: “Ọ bụrụ na mmadụ akpachaghị anya, o nwere ike ịna-esi ọnwụ ka o merie n’egwuregwu. Ọ bụrụ na mmadụ ma egwuregwu ọ na-eme nke ọma, ọ ga-adịkwu mkpa ka onye ahụ mụta ịna-ejide onwe ya.”
Ihe ị ga-echebara echiche: Otu nwa okorobịa aha ya bụ Chris kwuru, sị: “Anyị na-agba bọl kwa izu, anyị na-emerụkwa ahụ́.” Jụọ onwe gị, sị, ‘Olee ihe ndị nwere ike ime ka mmadụ na-emerụ ahụ́ n’egwuregwu a? Gịnị ka m nwere ike ime ka anyị ghara ịna-emerụkarị ahụ́?’
Awa ole i ji egwu egwu. Baịbụl sịrị: “Chọpụta ihe ndị ka mkpa.”—Ndị Filipaị 1:10.
I kwesịrị ịhazi oge gị ka i nwee ike ibu ụzọ na-eme ihe ndị gbasara ofufe Chineke. Ọtụtụ egwuregwu na-ewe oge igwu ha ma ọ bụ ile ha ele. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Daria kwuru, sị: “Mụ na mama m na-esekarị okwu gbasara awa ole m na-eji ele tiivi, n’ihi na e nwere ezigbo ihe m kwesịrị iji oge ndị ahụ eme.
Mmadụ igwufe egwuregwu ókè dị ka mmadụ itinyebiga nnụ ókè ná nri
Ihe ị ga-echebara echiche: Ị̀ na-ege nne na nna gị ntị ma ha gwa gị ihe ndị ka mkpa ị ga-eji oge gị eme? Nwa agbọghọ aha ya bụ Trina kwuru na e nwere mgbe ya na ụmụnne ya na-ahapụ ọrụ dịịrị ha, na-ele ndị na-egwu egwuregwu na tiivi. N’oge ahụ, mama ha na-echetara ha na a na-akwụ ndị ahụ na-egwu egwuregwu ụgwọ, ma hà lere ha ma hà eleghị ha. Mama ha na-ajụzi ha, sị, ‘Ònye na-akwụ unu ụgwọ?’ Trina kwuru na ihe okwu mama ha pụtara bụ na ọrụ ndị ahụ bụ egwuregwu ahụ ha na-egwu. Ma, ọ bụrụ na hanwa ahapụ ọrụ e nyere ha n’ụlọ akwụkwọ nakwa ọrụ ndị ọzọ dịịrị ha gaa na-ele tiivi, n’ọdịnihu, ha agaghị enwe ike inweta ihe ha ga-eji na-elekọta onwe ha. O kwuru na ihe mama ha na-agwa ha bụ na igwu egwu ma ọ bụ ile ya na tiivi ekwesịghị ịbụ ihe kacha ha mkpa.
“E wezụga na egwuregwu na-eme ka mmadụ megaa ahụ́, ọ na-emekwa ka mmadụ nwee obi ụtọ, ahụ́ agbasiekwa onye ahụ ike. Ọ na-eme ka mmadụ ghara ịna-etu ọnụ ma o merie ndị ọzọ ma ghara ịna-eme ihere ma ndị ọzọ merie ya.”—Abigail.
“Egwuregwu na-atọ m ụtọ. Ma, e nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa m kwesịrị ime. M weere egwuregwu ka ihe mmadụ ga-eji zuru ike ma ọ rụchaa ọrụ dịịrị ya. Ile ya anya otú a na-eme ka m mara ihe ndị ka mkpa m kwesịrị ime.”—Deven.
Mara Mgbe I Kwesịrị Ịrụ Ọrụ na Mgbe I Kwesịrị Igwu Egwu